नेपाल आज | ठीक हो ! प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीका केही निर्णयले अफ्ठ्यारो भो (भिडियोसहित)
ठीक हो ! प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीका केही निर्णयले अफ्ठ्यारो भो (भिडियोसहित)
मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि विश्राममा गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार आइरहेको छ । प्रधानमन्त्री खतरामुक्त रहेको र उहाँ चाँडै नियमित काममा फर्कने विषयमा ढुक्क हुन प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईको आग्रह छ ।
डा. भट्टराईका अनुसार प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा तीव्र सुधार भैरहेको छ । चिकित्सकहरुले डिस्चार्ज गरेपछि पार्टी र सरकारको कामले थप गति पाउने उनको भनाइ छ । डा. भट्टराईले नेपाल आजसंग गरेको कुराकानीका महत्वपूर्ण अंश यस्ता छन् :
क ) प्रधानमन्त्री खतरामुक्त हुनुुहुन्छ, ढुक्क भए हुन्छ । चाँडै डिस्चार्ज भएर काममा फर्कनु हुन्छ ।
ख ) राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयनको विषय मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकारको विषय हो । सबै सुझाव वा निर्देशन मान्नुपर्ने जरुरी छैन ।
ग ) बामदेव गौतमलाई पार्टीले सिफारिस गरेको विषयमा प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री डिस्चार्ज भएर आएपछि केही होला, त्यसअघि केही हुन्न ।
घ ) सांसद रामनारायण विडारीलाई राजीनामा गराएर गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने कुरा हावादारी हो, यसमा सत्यता छैन ।
ङ ) अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकको अर्थतन्त्रलार्ई सही ट्रयाकमा ल्याएको र अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था भने सकारात्मक दिशामा अघि बढेकाले त्यसलाई अझ राम्रो बनाउन डा. खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिइएको हो ।
च ) अर्थमन्त्री खतिवडाका कारण आयात निर्यात सुधारोन्मुख छ । दातृ निकायले दिने अनुदान र ऋण राम्रो छ । बैदेशिक लगानी पनि बढेको छ । बैदेशिक लगानीका लागि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षण केन्द्र बनेको छ । यी सबै कुरालाई अझ बलियो पार्न अझै केही काल खतिवडाको आवश्यकता छ ।
छ ) एमसीसीलाई पारित नगर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । केही त्रुटी भए अमेरिकासंग कुरा गरेर सच्याउन सकिन्छ, यसलाई फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा उचित हुँदैन । यो संसद्मा टेबल भएकै दिन पास हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।
ज ) एमसीसी पास भए चीन रिसाउँछ, सहयोग रोक्छ भन्ने हल्ला गलत हुन् । ‘एमसीसी र बीआरआई’ मा एकसाथ अघि बढेका थुप्रै देशहरु छन् । यसमा कुनै समस्या छैन ।
झ ) चीनले एमसीसी अस्वीकार गर्न भनेर दवाव दिएको छैन । कसैले दवाव दियो भने त्यो स्वीकार गर्ने कुरा पनि आउँदैन । हामी आफनो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुसार निर्णय गरी काम गर्न सक्षम छौं ।
ञ ) एमसीसी इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटिजीको अंग होइन । हिजो सम्झौतामा जे कुरा उल्लेख छन, त्यसमै टेकेर बोल्नुपर्छ । हामीले गरेको सम्झौतामा आईपीएसको कुनै कुरा उल्लेख छैन । हामी कुनैपनि सैन्य र राजनीतिक गठवन्धनमा फस्दैनौ ।
ट ) भारतसंग सीमाका विषयमा छिटै वार्ता हुँदैछ । वार्ताका माध्यमबाट हामी लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा फर्काउँछौं । अन्य सीमासंग जोडिएका विषय पनि हामी वार्ताबाट हल गर्दैछौं । चाँडै वार्ताको मिति तय हुन्छ ।